Item No .: MS-S5702D-Comanche
Nalalka hore ee laydhku waxay la yimaaddaan ilays sare, dogob hoose, drl iyo calaamadda leexashada. Ku habboon 1986-1992 Jeep Comanche Mj, fur oo ciyaar.
Our Jeep Iftiinka hore ee Comanche wuxuu la yimaadaa dogob sare, dogob hoose, drl iyo calaamadaha leexashada, 6500K midab heerkul ah oo u dhow qorraxda dabiiciga ah si loo hagaajiyo hufnaanta aragtida wadista iyo kordhinta raaxada wadista. Wanaagsan waxqabadka biyaha iyo boodhka oo aan fiicnayn. Kiiska guriyeynta waara oo leh kuleylka kuleylka waxqabadka wanaagsan. Cufnaanta sare ee tamarta iyo iftiinka iftiinka si loo ballaariyo qadka aragtida, waxay kuu siyaadinaysaa xaalado waditaan aamin ah. Kuwani Jeep YJ Halo Headlights waxay leeyihiin adeegsi hooseeya, hufan, keydinta tamarta iyo astaamaha ilaalinta deegaanka. Waqtiga jawaabta / deminta korontada oo sarreysa, Nolol adeeg dheer ah in kabadan 50000 saacadood. Bareeso oo ciyaar, rakibidda fudud, badanaa waxay kugu kacdaa qiyaastii 15 daqiiqo rakibidda. Ku habboon 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Jeep Comanche Mj.
Faahfaahinta 5x7 Laydhka Laydhka Led
Number Model MS-S5702D
Beam Sare 30W 2100LM
Laydhka Hoose 15W 1050LM
Giraanta Halo DRL + Turn Signal
Features of Jeep Comanche MJ nalka hore
Neefta Neefta - Si sahal ah looga helo qoyaanka hawo-mareenka neefsashada si loo hubiyo in biyuhu yihiin heer sare.
Kala-baxa Heat-ka wanaagsan - Qalabka aluminium-ka-dhinta ayaa u habboon ku-faafidda kuleylka.
PC Lens / PC Cover - Guriyeynta PC-yada ee sare, ka hortag huruud, iska ilaali dildilaaca.
Iftiin ifaya - Waxaa lagu sameeyay jajab aad u dhalaalaya oo LED ah, 55W dhalaalka dhalaalaya oo aan lahayn dhibco, khadka saxda ah ee la jaray ayaa ah
fiiqan oo toosan, iyadoo la siinayo aragtida ugu ifka iyo ballaadhan.
Bareesada iyo Ciyaar- Si fudud loo rakibo, loo xiro oo loo ciyaaro.
Faa'iidooyinka 5x7 Led Headlines